About Us - Weihai Tonglian nemazvo Machinery Co., Ltd
Other kabhoni internet Machine
. Weihai tonglian nemazvo muchini Co, Ltd iri yakaisvonaka romumhenderekedzo yegungwa guta - Weihai guta Shandong province. kushandisa kugadzirwa hove, gorofu kugadzira midziyo, uye anobudirira kuwedzera kukura huru dhayamita girazi chubhu, dzimwe indasitiri kabhoni chubhu vhoriyamu munda Kuumbwa michina. Panguva iyoyowo kutsigira siyana makirisito muforoma, simbi nenhumbi uye yepamusoro tsvimbo hove.
The kambani kubva pahwakagadzwa muna 2001, pashure mhepo uye mvura kugeza, tempering, chigadzirwa unhu akavimbika uye kuvimbika pabasa mukurumbira, kuva zvikuru kwenyanzvi mutungamiri indasitiri. Product zvakanakisisa-kutengesa nyika uye aivigirwa kuJapan, France, Siriya, India, Vietnam, Taiwan uye dzimwe nyika uye kumatunhu, pamusika mugove pamusoro maindasitiri.
Tonglian kuda kudzokera irere "Tong Handakun" kukura sturdily iri vadanana ari mafungiro pano, pamwe itsva zvigadzirwa, yokuisvonaka uye rebasa pfungwa, basa iri mumhuri hove indasitiri nezvimwe maindasitiri nenyere ematongerwo mugadziri, kuti vavandudze pave ari indasitiri!
2018 iri gore hwakakodzera kutarisira add ...
Pakutanga kwegore, yava Nokufarisisa mavambo akanaka. Pakutanga kwegore rino, kambani yakatanga mutsva otomatiki mufanidzo lacquering muchina womuenzaniso. muenzaniso iri rakagadzirirwa lacquer kugadzira. It kwete ...
We akahwina musoro "specialization ...
On September 19, 2016 mu weihai guta Bureau Director Tsai, mukuru mumwe musi-the-gwapa kuongorora kuti fekitari dzangu, akashanyira fekitari yedu zvakadzama tsvimbo midziyo kugadzira workshop, chakuvhuvhu kugadzira workshop nhamo ...